Rehefa apetraka ny tabilao fizaran-tany dia zahao raha afaka miasa ara-dalàna ny tabilao mihodina, mazàna tsy manome herinaratra mivantana ny takelaka boribory fa araho ny dingana etsy ambany: 1. Raha marina ny fifandraisana. 2. Na fohy ny famatsian-jiro. 3. Famaritana fametrahana ny singa. 4. Ataovy aloha ny fizahan-tany sy ny fizahana fohy mba hahazoana antoka fa tsy hisy ny lalan-kely aorian'ny herinaratra. Ny fitsapana herinaratra dia azo atomboka aorian'ny fitsapana fitaovana etsy ambony alohan'ny hery-o ...
Ny fonosana roa in-line dia antsoina koa hoe fonosana DIP, DIP na DIL raha fintinina. Izy io dia fomba fonosana mihodina. Ny endrik'ilay boribory mitambatra dia mahitsizoro, ary misy andalana roa ny tsimatra vy mifanila amin'ny andaniny roa, antsoina hoe fanjaitra andalana. Ireo singa ao amin'ny fonosana DIP dia azo soloina ao anaty lavaka vita amin'ny plastika vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty na ampidirina ao amin'ny faladiany DIP. Ny felika miharo dia matetika mampiasa fonosana DIP, ary ny faritra fonosana DIP ampiasaina matetika dia misy DIP switch ...
Ny tsipika famokarana SMT Assembly dia antsoina koa hoe Surface Mount Technology Assembly. Izy io dia taranaka vaovao amin'ny teknolojia fivoriambe elektronika novolavolaina tamin'ny teknolojia circuit integrated hybrid. Izy io dia miavaka amin'ny alàlan'ny fampiasana haitao ambonin'ny haavo sy ny haitao soldering, ary lasa taranaka vaovao amin'ny teknolojia fivoriambe amin'ny famokarana vokatra elektronika. Ny fitaovana lehibe indrindra amin'ny tsipika famokarana SMT dia misy: milina fanontana, milina fametrahana (singa elektronika amin'ny ...
Hentitra Flex PCB Ny teraka sy ny fampandrosoana ny FPC ary ny PCB henjana dia miteraka vokatra vaovao an'ny tabilao azo raisina. izay fitambaran-tabilao miovaova sy tabilao mihodina. Aorian'ny fanerena sy ny fomba hafa, ampiarahana arakaraka ny takian'ny teknolojia mifandraika amin'izany ny famoronana tabilao misy fizarana FPC sy toetra mampiavaka ny PCB. izay azo ampiasaina amin'ny vokatra sasany misy fepetra takiana manokana, na faritra marefo na faritra henjana sasany, mba hamonjy ny intern ...
Fampahalalana bebe kokoa momba an'io 12 sosona PCB Board sosona io: 12 sosona Famaranana ny hatevin'ny tabilao: 1.6mm Fitsaboana ambonin'ny tany: ENIG 1 ~ 2 u ”Fitaovana takelaka: Shengyi S1000 Vita ny hatevin'ny varahina: sosona anatiny 1 OZ, sosona 1 OZ Soldmask loko: Green Silkscreen loko: fotsy miaraka amin'ny fifehezana Impedance Jamba & nalevina vias Inona avy ireo fitsipika fototra momba ny fiheverana ny impedance sy ny famolavolana stack ho an'ny multilayer boards? Rehefa mamolavola impedance sy stacking, ny tena fototra dia ny hatevin'ny PCB, ny isan'ny sosona ...
Famaritana amin'ny antsipiriany momba ity PCB 10 sosona ity: sosona 10 sosona fanaraha-maso imppedance Eny board material FR4 Tg170 Jamba & nalevina Vias Eny Vitao ny birao matevina 1.6mm Edge plating eny Vitao ny varahina varahina anatiny 0,5 OZ, fitrandrahana laser 1 OZ eny, fitsaboana eny ambonin'ny ENIG 2 ~ 3u "Fitsapana 100% E-fitiliana Soldmask Color Blue Testing Standard IPC Class 2 Silkscreen Color White Lead Time 12 andro aorian'ny EQ Inona ny PCB multilayer ary inona ny mampiavaka ny b multilayer ...
Famaritana ho an'ity PCB HID ity: • sosona 8, • Shengyi FR-4, • 1.6mm, • ENIG 2u ", • 0,5OZ anatiny, 1OZ oz ivelany • fivarotana mainty, • silccreen fotsy, • nopetahana tamin'ny alàlan'ny, manokana: • Vias jamba sy nalevina • rakotra volamena sisin-tany, • hakitroky ny lavaka: 994,233 • teboka fanandramana: 12,505 • laminate / tsindry: in-3 • fantsom-bozaka mekanika + voafehy + fandavahana laser (in-3) Ny teknolojia HDI mazàna dia mitaky fepetra lehibe kokoa amin'ny haben'ny pirinty momba ny boribory vita pirinty, ny sakan'ny tariby, ary ...
Famaritana ho an'ny sosona PCB 4: sosona: 4 Birao Fitaovana: FR4 Vita ny hatevin'ny birao: 1.6mm Vita ny hatevin'ny varahina: 1/1/1/1 OZ Fitsaboana ambonin'ny tany: Volom-boaloboka (ENIG) 1u ”Loko Soldmask: loko miloko fotsy: fotsy Miaraka amin'ny fanaraha-maso Impedance Ny fahasamihafana lehibe indrindra misy eo amin'ny takelaka multilayer PCB sy ny zana-kazo iray sy ny zana-droa dia ny fanampiana ny sosona herinaratra anatiny (hitazonana ny sosona elektrika anatiny) sy ny sosona tany. Ny herinaratra sy ny tariby mitete ne ...
Ity dia takelaka PCB 8 sosona miaraka amin'ny famaritana toy ny etsy ambany: 8 sosona Shengyi FR4 1.0mm ENIG 2u ”anatiny 0,5OZ, mivoaka 1OZ Matt black soldmask Silkscreen fotsy Nopetahany takelaka amin'ny alàlan'ny jamba amin'ny alàlan'ny 10 pcs isaky ny tontonana ? Ny laminating dia ny dingan'ny fampiraisana ny takelaka boribory tsirairay ao anatiny. Ny fizotrany rehetra dia misy fanindriana fanorohana, fanindriana feno ary fanindriana mangatsiaka. Amin'ny dingan'ny tsindry oroka, ny resina dia miditra amin'ny fatorana ary mameno ny banga ao ...
Tombony amin'ny milina fandokoana loko telo-porofo mandeha ho azy: fampiasam-bola indray mandeha, tombony maharitra. 1. Fahombiazana avo lenta: ny fandefasana mandeha ho azy sy ny tsipika fivoriambe dia mampitombo be ny vokatra. 2. Kalitao avo lenta: ny haben'ny firakotra sy ny hatevin'ny loko telo-porofo amin'ny vokatra tsirairay dia tsy miovaova, avo lenta ny tsy fitovizan'ny vokatra ary azo antoka sy azo itokisana ny kalitao misy porofo telo. 3. Famaritana avo lenta: fonosana voafantina, fanamiana ary marim-pototra, ny fametrahana mazava tsara dia avo kokoa noho ny manual. ...